Custom Dome avo lenta Dome Logo Decal Miaraka amin'ny traikefa 25 taona sy ISO Cert, Shina Dôdônaly Dome avo lenta Decal Miaraka amin'ny traikefa 25 taona sy mpanamboatra ISO Cert, mpamatsy, orinasa-lehibe kokoa
Room 1004, Nan Yang Da Sha, Nan Bu Shang Wu Qu, Distrik Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, Sina. 315000
Ho an'ny Auto
Ho an'ny fampiroboroboana & Souvenir
Ho an'ny milina sy vokatra
Ho an'ny fonosana
Asehoy ny tranga
Home>Products>Ho an'ny Auto>Dome Emblem
Fiantohana fiara & Decal
Tompon'ny hetra amin'ny fiara
Fitaovana fiara plastika namboarina
Andriamby vata fampangatsiahana
Kitapom-batsy sy fampitandremana
Ampahany plastika namboarina
Fametahana tavoahangy vy
Label momba ny sombin-javatra mahafinaritra
Akanjo sy marika kitapo vy
Decal Logo Dome avo lenta avo lenta miaraka amin'ny traikefa 25 taona sy ISO Cert
Fandefasana: Courier, fandefasana rivotra, fandefasana ranomasina
Payment: Paypal, TT, VISA, West Union, Ali Trade
Price: exw 0.45-0.85USD
Ny sticker sticker dia manana fahaizana miavaka amin'ireo ambiny.
Ny kalitaon'ny sary sy ny endrika fanoherana ny vodiny dia alao antoka fa mijanona amin'ny fomba itiavanao azy ny sticker domeo.
Ny dite sticker dia mety tsara amin'ny fijanonana amin'ny fiara, fitaovana ao an-trano, masinina ary rindrina. Manana epoxy resin sy pu resin material izahay hanomezana fahafaham-po ireo zavatra ilainao isan-karazany.
MATERI-BOLA Quality TECHNOLOGY FAMPIHARANA
Viny fotsy PU Resin Screen fanontana Motive Auto
Vinyl mangarahara (2-5 taona tsy misy mavo) Fandokoana UV feno loko Machines
Vallika metaly Epoxy Resin Fanontana nomerika nomerika feno Fitaovana ivelany
Vinyl glitter （6 volana tsy misy mavo） Die Cut & Kiss Cut TOKATRANO ENTIN
Vatic Static Mandalo fitsapana ROHS Fandokoana marindrano Fitaovana fiarovana
Metal foil （Tsy voatery） Surface madio Promotion
Natonta printy mitovy Mpitondra Souvenir mpivarotra antsinjarany
Emboss & Deboss Furniture
Laharana namboarina namboarina Kilalao kilalao
Fanontana amin'ny lafiny roa （Tsy voatery） valizy
Atao pirinty amin'ny taratasy aoriana Sns
Size: 16 * 13cm
Supply Fahaizana: 1620000 Piece / Month
endrika: namboarina Ora nanomezana: Ao anatin'ny 10-28 andro aorian'ny nanamafisana ny filaminana
Mandritra ny fotoana: 5-7 andro eo ho eo Seranan-tsambo lehibe: Ningbo, Shanghai, Shenzhen, Cannan
Design: namboarina Packaging Details: Kitapo OPP na vahaolana namboarina
Fitaovana: PVC Term:
Fanandramana mihoatra ny 25 taona amin'ny fanontana sy fanaovana marika
Fanamboarana voamarina ISO / TS16949
Manome mivantana na ankolaka izahay aorian'ny tsena
Ny volavola sy ny loko miloko tsara dia manampy ny mpanjifa hahatadidy ny orinasanao, ary manome hery azy ireo hanaparitaka ny marikao. Ny fanontana lehibe dia mitazona ny hatsaran'ny marika (ary amin'ny tranga sasany dia mety manatsara azy io).
Mampalahelo fa ny mifanohitra amin'izany no marina - ny fampisehoana tsy dia manara-penitra dia mety hanome fiheverana fa ambany ihany koa ny vokatrao.
Mahatsiaro anao izahay! Fa inona no hoeritreretinao raha nilaza taminay ianao hoe Ever Greater® afaka manolotra anao vidiny lafo amin'ny fanontam-pirinty lehibe any Shina tsy misy olana amin'ny fifandraisana-isaky ny mandeha! Heverinay fa hiteny ianao hoe "Eny, azafady!"
Ity misy topy maso kely amin'ny rafitry ny fanarahan-dalàna; tianay ny hiantsoana azy io hoe Audite azo antoka. Na dia misafidy ny hiara-miasa amin'ny mpamatsy hafa aza ianao, dia mbola afaka manampy anao hahita vady azo antoka ity lisitra ity.
Fanamarinana ISO / TS16949 -Eny!
Fiarovana amin'ny fandoavam-bola PayPal -Eny!
Safidy azo antoka mandritra ny androm-piainana!
Fahafahana baiko azo refesina -Eny！
Fanaraha-maso henjana henjana -Eny!
Serivisy ho an'ny mpanjifa anglisy -Eny！
Serivisy fanomezana loharano - Eny!
Santionany alohan'ny famokarana-Eny！
Antoka ahazoana fahafaham-po ny mpanjifa- Eny!
Tombony azo amin'ny mpanjifa - Eny!
Greater Everer® Ny Solution Solutions dia mamaha ny tantara an-pirintinao rehetra ary manolotra serivisy tsy misy fanaintainana mitovy amin'ny marika sy entana hafa!
Azontsika atao ny mamolavola sy manolotra saika ny endriny rehetra saika amin'ny fitaovana rehetra.
NY tombontsoany mandrakizay
Manome fanontana matihanina maimaimpoana sy fanoloran-tena amin'ny plastika izay misy famakafakana feno momba ny faritry ny vokatra toy ny fampiasana, ny fitaovana ary ny tsingerin'ny fiainana. Ity famakafakana ity dia voamarina miaraka amin'ny vahaolana lafo vidy isaky ny teti-bolanao mamonjy fotoana, vola ary angovo.
Izahay dia manohy mamolavola sy mamatsy fitaovana vaovao sy teknika famokarana ahafahanay mamokatra vokatra avo lenta kokoa amin'ny fitaovana rehetra amin'ny vidiny mora vidy miaraka amin'ny fiheverana ny tontolo iainana faratampony. Ho fanampin'ny tolotra amin'izao fotoana izao ao amin'ny tranonkalantsika sy ny bokikely, dia raisinay ny soso-kevitrareo hampiasa fitaovana sy teknolojia vaovao. Raha tsy mbola manana izany izahay dia afaka manome izany ho anao!
Ny loharanom-pahalalana sasany dia loharano efa niasa mialoha izay mametra fatratra ny fahafaha-manaingo azy. Miara-miasa amin'ny akora izahay mba hitazomana ny fahaiza-manao faratampony sy fanovana pro-cess.
Filaharana ambany ambany
Nahita ny vokatra mety amin'ny vidiny mety, fa raha tsy mividy sombiny 20,000 XNUMX ianao! Tsapanay ny fanaintainanao! Ary izany no antony namelabelaranay ny fizotry ny famokarana sy ny logistics postage izay afaka manome kalitao miavaka sy fahombiazan'ny vidiny na dia ambany aza ny MOQ. Greater Everer® manompo mpanjifa lehibe sy kely mitovy-tongasoa eto daholo!
Izahay dia manome toky ny mpanjifa fahafaham-po - mba ho marimarina, manolotra famerenam-bola feno amin'ny vokatra rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny famaritana ny kaomandinao.
Ny ekipanay fototra dia mahay tsara ny teny anglisy ary nitety firenena maro eran'izao tontolo izao noho ny varotra sy ny fitsidihan'ny mpanjifa. Hainay tsara ny fiteny teknika rehetra manodidina ny fanontana sy ny famokarana izay miantoka ny tsy fifandraisan-davitra na ny tsy ampoizina.
Miaraka, lehibe kokoa isika!
MENU SERVICES EVERGREATER MENU
Ny vahaolana printy turnkey sy ny bobongolo-tsindrona dia mifantoka amin'ny kalitao, fahombiazana ary fitehirizana vola.
Ny mantra antsika dia izao: Ataovy tsara kokoa, haingana sy mora kokoa! Ny mpamatsy sasany dia manolotra drafitra famokarana antonony, saingy avy eo ianao dia mirona amin'ny fizotran'ny fitaovana.
Greater Everer® miantoka fa ny zava-drehetra manomboka amin'ny fampitaovana ka hatramin'ny fanaterana dia mangarahara sy azo zakaina hahazoana antoka fa hahazo ny vokatra tsara indrindra ho anao sy ny orinasanao ianao!
Ka inona no dikan'ny hoe «turnkey» ao amin'ny Ever Greater® Vahaolana fanontana?
1. Mila mamakafaka ny tetikasa
2. Serivisy fandefasana
3. Serivisy fanomezana
4. Drafitra fanaraha-maso kalitao
6. Fanofanana sy fanohanana ara-teknika
7. Tohin-kevitra sy toro-hevitra mitohy
Add:Room 1004-2, NanYang Center, distrika yinzhou, tanàna Ningbo, Sina.
Direct manager:Miranda Wang
Copyright © Ever Greater Zo rehetra voatokana.